निसन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले आँखै अगाडि यौन सम्पर्क गर्न लगाए,किन कारण पढ्नुहोस् ! – List Khabar
Home / रोचक / निसन्तान दम्पत्तिलाई डाक्टरले आँखै अगाडि यौन सम्पर्क गर्न लगाए,किन कारण पढ्नुहोस् !
admin October 18, 2021 रोचक Leaveacomment 545 Views
एजेन्सी / सन्तान नभएका दम्पत्ति आफ्नो सन्तान प्राप्तीका लागि चिन्तित भई अनेक उपायमा लाग्छन् । त्यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ । एक निसन्तान दम्पत्ति उपचारको लागि कथित डाक्टरकोमा गए । निसन्तान दम्पतीको उपचार गर्ने डाक्टरले आफ्नै अगाडि यौन सम्बन्ध राख्न लगाए । डाक्टरले कसको गल्ती कहाँनिर छ भनेर हेर्न चाहेको बताएपछि दम्पत्ति पनि तयार भए र उनले भने जस्तै गरे ।
तर उनीहरुको उपचार गर्ने डाक्टर सक्कली भने होइनन् भन्ने पछि थाहा पाए । हाल डाक्टरलाई अदालतले १० वर्ष जेल र १० हजार रुपैयाँ सजाय तोकेको छ । योगेश कुपेकर नामका एक व्यक्तिको सम्र्पकमा निसन्तान दम्पत्ति पुगेका थिए ।
उनीहरुलाई योगेश आफैले निसन्तानको डाक्टर भएको जानकारी दिएका थिए । नक्कली डाक्टरलाई दम्पतीले सन्तानको लागि जे गर्न पनि तयार रहेको बुझिसकेकाले उनीहरुलाई झुक्याए ।
उनले दम्पतीलाई आफू नजिक बोलाएर भने कि मेरो आँखा अगाडि शारीरीक सम्बन्ध राख्नु । उनले आफ्नो अगाडि सम्बन्ध राख्दा गर्भवती हुने बताएका थिए। उनले यतिमात्र गर्न लगाएनन् दम्पत्तिसँग पैसा पनि लिए । कथित डाक्टरले भने जस्तै गर्दा पनि गर्भवती नभएपछि उनीहरुलाई तनाव हुन थाल्यो ।
महिलाको स्वास्थ्य बिग्रदै जाँदा अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्यो । उसको उपचारले केही काम नगरेपछि ठगी गरेको शंका लागेर प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले आरोपीलार्ई समातेर १० वर्षको जेल र १० हजार रुपैयाँ सजाय सुनाएको छ ।
Previous विवाहको उमंग नसकिदै ठुलो शोकमा डुबे मनोज गजुरेल
Next लिभिङ टुगेदरमा बस्न केटा चाहियो भन्दै रमिला कार्की मिडियामा, धेरै माया गर्ने केटाले यसरि भेट्न सक्छ मलाई भनेर आफ्नो चाहाना खुलाईन रमिलाले (भिडियो हेरौ)